Izindawo ze-Greek Online Casino - Amakhodi we-Casino e-inthanethi
(345 amavoti, isilinganiso: 4.00 out of 5)
Iyalayisha ...Eminyakeni eyishumi edlule kube nokwenyuka okukhulu kwenani lamakhasino eGrisi. Njengakwezinye izingxenye zomkhakha wezokuvakasha eGrisi, amakhasino aseGrisi enza konke okusemandleni awo ukuheha abadlali unyaka wonke hhayi kuphela ngesikhathi seholide elidumile lasehlobo. Njengengxenye yale mizamo, ikhasino yamaGrikhi ilandele imodeli eLas Vegas. Bajwayele ukuba yingxenye yamahhotela / izindawo zokungcebeleka ezinkulu, abahlinzeka ngendawo yokuhlala kanokusho, ezokungcebeleka, imisebenzi yezemidlalo, imidlalo yokuzijabulisa. ICasino Marketing ibhekiswe kakhulu kubavakashi bakwamanye amazwe, yize imidlalo yamakhadi ithandwa kakhulu kumasiko amaGrikhi, futhi eGrisi kunezinkulungwane zamakilabhu okudlala amakhadi ezweni lonke okungewona amakhasino.
Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 Greek Online Casino
Namuhla ukuvakasha kwethu kwamakhasino amahle kakhulu eYurophu ukuqhubeka endaweni yokuphumula yezwe ogwini lwaseMedithera ngomlando ocebile. Leli zwe lidume ngemidlalo yokuqala yama-Olimpiki, ukudla okungakaze kudaywe kanye nezazi zefilosofi zalo. Ngakho-ke, amaCasinoToplists athunyelwe eGrisi!
IGrisi - i-geography kanye nomlando omncane;
I-casino «i-Mont Parnes».
Ukufaneleka kwabasebenzi bezindawo, cishe beba ukunqotshwa;
Abaqhubi bamazwe ngamazwe cishe akuvinjelwe ngaphandle kwelayisense.
I-capital yesihlanu yamaGreki e-Athens ibheka amakheli;
Amaqiniso amahle mayelana neGreece namaGreki.
Ukugembula eGrisi kunomlando omude osukela endulo. AmaGreki asendulo ayengabadlali abanentshisekelo futhi ayekholelwa kwimidlalo evela kuNkulunkulu. Isibonelo, ezinganekwaneni zamaGrikhi, kunenganekwane yokuthi ngemuva kokunqoba iTitans, uZeus nabafowabo uPoseidon noHayidese benza inkatho ukunquma ukuthi ngubani othola ingxenye eyodwa yomhlaba noma enye. UZeus wanqoba i-Olympus, iPoseidon - ulwandle neHayidese - indawo yabafileyo. Lokhu kusatshalaliswa kokuthunyelwe akubalulekile kangako, kuthakazelisa kakhulu ukuthi amandla wezwe ayedlalwa kusetshenziswa amathambo.
Inganekwane ethokozisayo echaza ngemvelaphi yokugembula namakhasino. Lapho nje uTycho, unkulunkulukazi wenhlanhla, wayehamba ezihlahleni ezinomthunzi zase-Olympus, lapho uZeus (ngaleso sikhathi owayengumdlali wokudlala omncane kanye ne-libertine) ayemyenge khona. Kule nyunyana kwazalwa intombazane - ingane engavamile, kuphela ukuthola injabulo ekusunguleni imidlalo ehlukene lapho umphumela unqunywa kuphela. Ubuke ngenjabulo ingxabano eyaqubuka phakathi kwabadlali futhi wanxusa abahluliwe abakhungathekile ukuthi bazibulale. Ukuthokozisa indodakazi yakhe enonya, wayinika izindlu buthule, lapho kunqenqemeni, okuheha abadlulayo, kwasha isibani esingacimi.
Ngaphandle kwezinganekwane khuluma ngokugembula kanye nezibalo zomlando zangempela. Ngakho-ke, ku- "Odyssey," uHomer uxoxa indaba yokuthi abamemezi banikela kanjani idayisi, ukujabulisa amasosha amaGrikhi, enesithukuthezi elinde ukuvinjezelwa kweTroy. Isazi-mlando esingumGreki uPlutarch ukhuluma ngendlovukazi yasePheresiya iParisatis, eyayingumuntu othanda umdlalo wedayisi.
I-Craps yalethwa eGrisi ivela e-Asia futhi yayithandwa phakathi kwazo zonke izinhlaka zomphakathi. Kukhona izindawo ezikhethekile - okhokho bamakhasino abenzelwe imidlalo ehlelekile. Kodwa-ke, iningi labenzi bomthetho baseGrisi ababhekise ekugembuleni babukelwa phansi, bebheka lolu hlobo lokuzijabulisa njengenselelo ekuziphatheni komphakathi, lubukela phansi izisekelo zombuso. Isijeziso sabadlali abangenakuguquka, kungakhathalekile isikhundla sabo senhlalo, sasisebenza njengezigqila.
IGrisi yanamuhla idale izimo zezokuvakasha, ezihlobene nokugembula, futhi ilawula nemakethe ye-gemblingovy ngeziphathimandla ezifanele. Isimo seGrisi ngokugembula siqine kakhulu, inqubomgomo kahulumeni ihlose ukuzama ukuvimbela abantu ekugembuleni. Ngokomthetho waseGrisi, ukudlala ukugembula kuvunyelwe kuphela ngaphakathi kwekhasino. Zonke izinhlobo zokubheja nokugembula ngaphandle kwamakhasino akuvunyelwe, ngoba ukwephula umthetho wendawo kuhlinzeka ngesikweletu sobugebengu.
Ikhasino lokuqala eGrisi lasungulwa ngo-1928 endaweni yaseLoutraki, kuphela amakhasino asemthethweni ayi-9 ezweni manje. ukusebenza kwamakhasino eGrisi kulawula iKhomishini Yezokugembula, eyasungulwa ngoDisemba 20, 2011. Ngo-Okthoba 2013 kwanqunywa ububanzi bemisebenzi yayo: amalayisense, ukugadwa nokulawulwa kwamakhasino asemhlabeni ezweni. IKomidi linamalungu ayisishiyagalombili kanye nosihlalo, okhethelwa isikhathi seminyaka emihlanu. Amalayisense okuqala akhishwa ngo-1994, amakhasino amathathu: iCasino Mont Parnes, iCasino Korfu neCasino Rodos. EGrisi, akukho monopoly: wonke amakhasino asezandleni zabahlinzeki abambalwa. Okukhulu kunazo zonke yiRegency Casino, efaka amakhasino eCasino Mont Parnes eThesaloniki.
Ngo-2002, uhulumeni waseGrisi waphasisa umthetho oyimpikiswano 3037/2002, owenqabela umdlalo kuyo yonke imidlalo ye-elekthronikhi ezindaweni zomphakathi. Lo mthetho onzima wasulwa kuphela ngo-Agasti 2011. Umthetho omusha ubeka imigomo yemidlalo efanelekile futhi wethula lokho okubizwa ngokuthi “amakhadi wabadlali” adingekayo ukuze bakwazi ukugembula ngokusemthethweni eGrisi. Ukuze bakwazi ukudlala ekhasino, amaGrikhi asefinyelele eminyakeni engama-21.
Kuphi, nini nokuthi yini okufanele uyenze ku-casino yesiGreki?
Njengamanje, iGrisi isebenza ngamakhasino ayisishiyagalolunye anamalayisense. Zitholakala ezwekazini naseziqhingini zaseGrisi iRhodes, iSyros neCorfu. Amakhasino amaningi avulwa kusukela ngoMsombuluko kuya ngeSonto futhi anamahora angama-24 ngosuku. Yonke iyimidlalo ethandwayo efana ne-roulette, i-blackjack, i-video poker, iPunto Blanco, i-Baccarat nemishini ye-slot. Futhi ibamba imiqhudelwano ye-poker. Ikhodi yokugqoka kumakhasino amaningi aseGrisi - smart abayitoho, kepha ungazami ukungena ngaphakathi ngezingubo zasolwandle.
I-1. Club Hotel Casino Loutraki
I-Casino Loutraki - ikhasino yokuqala yaseGrisi. Itholakala enxanxatheleni yamahhotela e-resort eLoutraki-Agioi Theodoroi. Le ngenye yamakhasino amakhulu kunawo wonke eYurophu, nayo enesikhungo se-spa nezingqungquthela. Ngaphezu kwalokho, abadlali bangadlala ngesikhathi sabo samahhala ukujabulela ukubukwa kwendawo, njengeCorinth Canal, i-Ethnographic Museum kanye nethempeli lase-Apollo, eKorinte.
I-2. I-Regency Casino Thessaloniki
Lawa amakhasino athandwa kakhulu eGrisi atholakala edolobheni laseThesaloniki, “inhlokodolobha esenyakatho” yaseGrisi, futhi kusukela ngo-1996. Itholakala eduze nesikhumulo sezindiza saseMakedoniya futhi ihamba ngemizuzu engama-20 ukusuka ezindaweni eziyinhloko zedolobha . Isakhiwo sekhasino siyathandwa ngomhlobiso waso ocebile. Ikhasino inikela ngemishini engu-893 yamathebula namatafula angama-66 emidlalo yebhodi. Kukhona negumbi elizimele leHigh Rollers Club Regency, elinemishini engu-18 namatafula ayi-14 emidlalo yebhodi.
I-3rd Casino Rhodes
I-Rhodes Casino idume ngokwakhiwa kwayo kwasendulo okuyingqayizivele nokwakhiwa kwangaphakathi. Kubonisa ngokuphelele isimo esisenkabeni yedolobha elidala futhi esisendaweni yehhotela likanokusho iGrande Albergo delle Rose boutique hotel. Inakho konke ukujabulisa abadlali: imishini yama-slot, amatafula amaningi we-poker, i-roulette neminye imidlalo. Ikhasino lisebenzisa ikhodi yokugqoka: 19.00 kuvunyelwe izingubo ezinembile nezangaphakathi, futhi ngemuva kuka-19.00 - ingubo yokuhlwa kuphela, isudi noma i-tuxedo.
I-4. Kerkira Casino
ECorfu, inhlokodolobha yesiqhingi saseCorfu, kusebenza elinye lamakhasino okuqala eGrisi, kwathi ngo-1962 kwaba yikhasino lokuqala eGrisi, labuyela esondweni le-roulette. Manje itholakala esikhungweni sokuzijabulisa seCorfu Holiday Palace, futhi kuze kube sekupheleni kweminyaka engama-80 yekhulu lama-20 yayisesigodlweni se-Empress Elizabeth wase-Austria-Hungary, iNdlovukazi uSissi. Indawo yokudlela ivulekile kusuka ku-20.00 kuye ku-03.00 yezivakashi ezingaphezu kweminyaka engama-23.
I-5. Ihhotela leCasino Xanthi
Le casino itholakala ehlathini lase Lefkos Pyrgos, engxenyeni esenyakatho-ntshonalanga ye-Xanthi.
Ukwakhiwa kwesakhiwo esinezitezi ezimbili (2200 sqm) kuyavumelana nobuhle bezihlahla ezinde ezisizungezile, okwenza indawo eyingqayizivele ihehe izivakashi kusukela kumzuzu wokuqala. Amahlaya amaGreki athi le yikhasino kuphela esebenza kuhulumeni - ngoba amanye ayizikhungo zokugembula ezizimele noma ezizimele. Ekhasino ungadlala i-roulette yaseMelika, i-blackjack, i-stud poker nemishini ye-slot.
I-6. I-Casino Porto Carras
Ikhasino lokuqala elizimele eGrisi Porto Carras lisendaweni yaseSithonia Hotel Porto Carras, okuyigugu langempela leHalkidiki. Kukhona imishini engama-425 slot, amatafula e-roulette 17, amatafula we-blackjack ayi-13 namatafula e-poker. Ngaphezu kwalokho, kukhona igumbi le-VIP le-roller ephezulu, lapho kukhona amatafula amathathu we-blackjack, amatafula e-roulette 5 ne-5 poker table. Ingaphakathi lakhiwe ngokucophelela ngesitayela sangempela seNew Orleans, kunendawo yokudla neziphuzo.
7. Porto Rio Ihhotela & Casino
Le khasino isebenza ehhotela elithile, ngemizuzu eyi-10 kuphela ukusuka enkabeni yePatra. Le nxanxathela itholakala ebhishi elihle eRio, ezingadini eziluhlaza eziluhlaza endaweni engamamitha-skwele angama-35,000, phambi kwenqaba yaseVenice. ICasino Rio inikela ngemidlalo yasetafuleni yakudala efana ne-blackjack ne-roulette, imishini engama-279 yama-slot nabalandeli be-poker balinde amatafula eTexas Holdem Poker. Izivakashi zingadlala imishini ye-slot nganoma yisiphi isikhathi emini noma ebusuku, ngoba ikhasino livuliwe amahora angama-24 ngosuku.
I-8. I-Casino Syros
ICasino itholakala edolobheni laseSyros Ermoupoli. Leli yikhasino elisha uma kuqhathaniswa - laqala ukusebenza ngo-Ephreli 1997 kuphela. Gugu. ICasino Syros inamatafula angama-1830 emidlalo ethandwa kakhulu: i-roulette, i-blackjack ne-stud poker, kanye nemishini engu-26 yokufaka.
I-9. I-Regency Casino Mont Parnes
IRegency Mont Parnes Casino Resort itholakala edolobheni laseMont Parnes, ebangeni lamakhilomitha ayi-17 kuphela ukusuka enkabeni ye-Athene. Le nxanxathela yekhasino neyehhotela etholakala kwenye yezindawo ezikhetheke futhi ezihehayo kunazo zonke i-Attica besinomlando weminyaka engaphezu kwamashumi amane. Eqinisweni, bekuyikhasino lokuqala, elivulwe eGrisi. Muva nje, le nxanxathela ithengwe yiqembu leRegency Entertainment SA, ebibambe ukuthuthuka nokulungiswa okuningana, futhi selikhule laba yindawo ephelele yesikwele esingu-18,000. Njengamanje, yikhasino yamazinga aphakeme kakhulu omhlaba. Kunamathebula we-blackjack ayi-16, ithebula le-roulette 32, ithebula 2 lePunto Banco nethebula le-poker 2, nezindawo ezingaphezu kwezingu-700. Amakhasimende amakhasino nehhotela eliyinkimbinkimbi nawo angakhululeka futhi ajabulele izinsizakalo zeklabhu yokuzivocavoca i-Club Olympus. Ngaphandle kwalokho,
Yize umthetho waseGrisi ungabavumeli abaqhubi bezokugembula ukuthi bathole amalayisense kumakhasino aku-inthanethi asebenza eGrisi, kepha ukubusa kokugembula okuku-inthanethi kuneqembu le-OPAP. Kodwa-ke, iGrisi, abadlali bangasebenzisa iziphakamiso ezahlukahlukene zabasebenza kwamanye amazwe, ezibeka indawo yakho kubasebenzisi bamaGrikhi. Njengamanje, kunamakhasino aku-inthanethi ayi-118 anikela lo mdlalo ngesiNgisi noma ngesiGreki futhi amukela amanani ngama-euro noma ngamaRandi aseMelika.
Ngo-2002, uhulumeni waseGrisi waphasisa umthetho ovimbela ngokuqinile zonke izinhlobo zemidlalo ye-elekthronikhi. Kodwa-ke, izinhlinzeko zalo mthetho zithanjisiwe nguMthetho we-2011, ovumela ilayisense yabasebenza ukugembula imidlalo eku-inthanethi. Kepha empeleni, ukubuswa kokuhlinzekwa kwemidlalo eku-inthanethi kuze kube ngu-2030 ephethwe yinkampani yokugembula yombuso waseGrisi i-OPAP. Yize kunjalo, ngo-2013 iNkantolo YaseYurophu yanquma ukuthi ubukhosi obunikezwa i-OPAP, abuhambisani nomthetho we-European Union. Ngakho-ke, umthetho waseGrisi kufanele uguqulwe ngokuya ngezidingo ze-European Union, iGreece izophoqeleka ukuvula imakethe yayo ukuze incintisane nezinye izinkampani.
Umlando ocebile wekhasino yaseRhodes
I-Rhodes Casino iyikhasino ethandwa kakhulu futhi ehehayo eGrisi. Kudala ngaphambi kokuba isakhiwo siqale ukusebenza ngekhasino, lapha kwaqhamuka ihhotela elichumayo okwamanje ngoMeyi 24, 1927. Lokhu kwahlala abantu abaningi abavelele abavela emhlabeni wonke, abanjengoWinston Churchill, Aristotle Onassis noGeorge Papandreou. Ihhotela libone imicimbi eminingi yomlando, njengokusayinwa kwe-State of Israel eyasungulwa ngo-1948.
I-Casino Loutraki ibhekwa njengobungane kakhulu emvelo
Ngo-2013, iClub Hotel Casino Loutraki yaklonyeliswa nge-International Prize of the Foundation for Environmental Education “Green Key in 2013” ​​ngokubamba iqhaza kwakhe ekuvikeleni imvelo. ICasino yaklonyeliswa ngokwakhiwa kohlelo lokusebenza lokuthuthuka okuqhubekayo kwemvelo esikhungweni sabo. Izinyathelo ezithathiwe zihlose ukunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi, ukusetshenziswa kahle kwemfucuza, imikhiqizo yokuhlanza, ukusatshalaliswa kwabasebenzi nezivakashi mayelana nokuvikelwa kwendawo yolwazi.
Indawo yaseGrisi, nesizinda somlando esincane
IGrisi ayiyona into ejwayelekile ibizwa ngokuthi "imbeleko yempucuko yaseNtshonalanga" - lapha eminyakeni engama-3,000 146 ngaphambi kukaKhristu, kwaba nempucuko yokuqala esiqhingini saseKrethe, ebizwa ngeMinoan. Sekukonke, umlando wamaGrikhi esiwujwayele ngisho nasezincwadini zomlando zesikole - ukuthi izindaba ezimayelana nepolitiki yaseSparta ne-Athene, le mpi ye-gladiator, lokhu kungukulwa okuyishwa phakathi koMbuso WaseRoma futhi kuncike kuwo kusukela ngo-XNUMX AD
Iyini iGrisi yanamuhla? Manje yindawo yokudlela edumile. Kusukela ngo-1924, iGrisi yaba yiphabhuliki yasephalamende, kwathi ngo-2002 yaba yimali esemthethweni ye-euro. IGrisi inezindawo eziyishumi nambili (izifunda), ezinama-13 nom (izifaniso zezifundazwe zaseRussia). Cishe i-51% yabantu - Ama-Orthodox angamaKristu, kanye neholide eliyintandokazi - iPhasika.
Amakhasino Nokugembula eGrisi
Iqiniso lokuthi iGreece ithola imali engenayo enkulu kwezokuvakasha lathinta isimo sikahulumeni ngokugembula. Ikhasino lokuqala lavulwa ngo-1928 eduze kwaseLoutraki (lena yindawo ethandwayo ethandwayo yezwe). Izinga lezinsizakalo ezinikezwayo lisezingeni eliphakeme kakhulu lamazwe omhlaba, futhi kusuka ezinhlobonhlobo zemidlalo nokuhlobisa okukhazimulayo kwamahholo ezivakashi kuqala isimo senjabulo.
Akudumile kangako phakathi kwabavakashi abajabulela ikhasino eThesaloniki, enesihloko esithi «Regency». Yiyona enkulu kunazo zonke futhi ifaka ngaphezu kwendawo yonke yekhasino yezindawo zokudlela ezi-3 ezihlakaniphile, imigoqo, kanye nesakhiwo sayo semidlalo yaseshashalazini.
Amakhilomitha ambalwa ukusuka e-Athene, ikhasino «Mont Parnes». Itholakala eNtabeni iParnassus, futhi ungafika lapho ngemoto yekhebula kuphela. I-Works iyikhasino ebabazekayo nsuku zonke ngaphandle kwangoLwesithathu. Uzodinga ukuba nepasipoti futhi ubheke ikhodi yokugqoka - ezemidlalo nezingubo ezingajwayelekile akumukelekile.
Abathandi benjabulo nemisebenzi yangaphandle baheha inketho kaSiroe esiqhingini sase-Ermoupoli. Lapha, ngaphezu kwamagumbi wokudlala kanokusho amathathu asezakhiweni zekhulu le-3, ungalujabulela uhambo ongalibaleka esikebheni nasekuhambeni egalari engaphansi komhlaba.
Inkampani enkulu kunazo zonke ehlanganyela enhlanganweni yokugembula eGrisi, ebizwa ngokuthi igobe.
Amageyimu e-inthanethi eGrisi
Njengoba sishilo ekuqaleni, isikhulu sodwa esizimele - yinhlangano eyebiwe. Kwakunguye okwamanje olawula isabelo sengonyama sokugembula online. Remote Ukugembula Association RGA lesi simo kuyaqondakala ukuthi abasithandi, kepha sendawo ngenkathi bengafuni ngempela ukungena endaweni yabo amakamelo e-poker aseYurophu.
Lapha ungadlala amakhasino aku-inthanethi, kepha kuphela kumasayithi agunyaziwe. IGrisi yenza yonke leyo mali ayizange igeleze isuke ezweni. Ngakho-ke, opharetha abajwayelekile bekhasino kuzodingeka badele isikhathi seholide, kepha kunethuba lokuzama ukunambitheka kwasendaweni bese uqiniseka nge-100% ngesiqinisekiso sokukhokha ama-winnings.
I-Athene nje igcwele zonke izinhlobo zokukhangisa.
I-Acropolis . Kubandakanya izakhiwo ezi-4: umnyango omkhulu (i-propylene), ithempeli lokuhlonipha umphathi wase-Athene, iParthenon, ithempeli lokuhlonishwa kukaNkulunkulukazi Wokunqoba, kanye ne-Erechtheum Palace ngokuhlonipha uPoseidon no-Athena. Ubukhazikhazi bezakhiwo buyathakazelisa futhi buhlaba umxhwele, ekubukeni izinto ezizobukwa kuzothatha okungenani amahora angama-4-5.
Ithempeli likaZeyus . Indawo: eduze ne-Acropolis neSyntagma, isikwele esikhulu sedolobha. Okwamanje, leli thempeli elake laba likhulu ngokubabazekayo lalisele lingamanxiwa kuphela. Kepha angifanele ukusho ukubabazeka okungaphansi futhi ngokuqinisekile kuyadingeka ekubukweni.
Umnyuziyamu Wezingane . Ikheli: Kydathenaeon, 14; Plaka. Kusukela ngo-1987 ukwakheka komnyuziyamu kujabulisa abantu abadala abakhathele ukubona amanxiwa nezithombe namakholomu asendulo, kunjalo, izivakashi ezisencane. Kuhlale kunokuthile okwenzekayo: zonke izinhlobo zokufundisana, imibukiso nokwenziwa.
Museum of the History of Greek Costume . Ikheli: 7, Dimokritou. Iqoqo lomnyuziyamu lezimpahla ezingaphezu kwezingu-250,000 ezivela kuzo zonke izinkathi. Noma ngubani onentshisekelo kwezemfashini uzothakazelisa ukubona isitayela sentuthuko sesiGreki.
I-Military Museum yaseGreece . Ikheli: ezimpambanweni zomgwaqo uVassilissis Sophias Av. noRizari, 2. IGrisi njengoba sazi sonke idume ngezindaba zayo zempi. Lapha ungakuthola konke okuphathelene nezindaba zempi, kusuka kumakhadi nemifaniswano kuya kumayunifomu omlando.
Amaqiniso anentshisekelo ngeGreece namaGreki
Isiphuzo osithandayo -Ikhofi. Iphuzwe kuzo zonke izinhlobo zokuhlukahluka ngamalitha, kepha itiye alihlonishwa;
Ukudla okuthandayo kwe-Greek souvlaki, ama-kebabs amancane kuma-skewers amancane, ngokuvamile ingulube;
Ngaphezulu kwezinsuku ze-250 zokushisa kwelanga ngonyaka, kunezintambo eziningi ze-solar ophahleni lwezindlu;
Olwandle alukho ngaphezu kwe-136 km, futhi kusuka kunoma yikuphi ezweni;
Ngenani lehlukaniso IGreece ihlala e-European Union;
Ukuba uthisha noma udokotela, kodwa ngokujwayelekile wonke umsebenzi webhajethi uhlonishwa kakhulu futhi ukhokhelwe kahle;
“Ne” ngesiGreki ngu “yebo” wethu;
Esikoleni, funda izilimi ze-2, phakathi kwazo isiNgisi kuyimpoqo;
AmaGrikhi akholwa kakhulu - usuku ngalunye esikoleni ngaphambi kokuba amakilasi afunde umthandazo, iholide eliyintandokazi - iPhasika.
IRhodes isiteji esidumile sokuvelela izimvemvane eziyisigidi ezithela lapha unyaka nonyaka
IGrisi ebalazweni laseYurophu
0.1 Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 Greek Online Casino
2.0.1 Indawo yaseGrisi, nesizinda somlando esincane
2.1 Amakhasino Nokugembula eGrisi
2.2 Amageyimu e-inthanethi eGrisi
2.2.1 Athens ezikhangayo
2.2.2 Amaqiniso anentshisekelo ngeGreece namaGreki
2.2.3 IGrisi ebalazweni laseYurophu